Amy Naing's Likes - Myanmar Network
Amy Naing's Likes
Back to Amy Naing's Page
နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲများ အပိုင်း (၁) အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဆိုရာတွင် အသုံးများသော၊ အသုံးဝင်သော စကားလုံးတွဲများ(Phrases) နှင့် စကားပြော ပုံစံ (Pattern) များကို မျှဝေလိုပါသည်။ စကားလုံးတွဲများသည် သီးသန့် တစ်လုံးစီ ခွဲထုတ်၍ မရဘဲ စကားစု အတိုင်း… Discussion နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲများ အပိုင်း (၁) 108 Likes
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၁၁) -ယခင် အပိုင်း ၁၀ ၏ အဆက်- ၃။ afteraperiod of time has passed အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကုန်လွန်အပြီး afteraweek/several hours/a long time တစ်ပတ်အကြာ၊ နာရီပေါင်းအတန်ကြာ၊ အတော်ကြာ e.g. After ha… Discussion သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၁၁) 20 Likes ဆံစ မှ ခြေဖျားအထိ ဝေါဟာရများ အပိုင်း - ၁၄ (B… ဆံစမှ ခြေဖျားအထိ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများတွင် ယခုတစ်ပတ်အတွက် ရင်သား (Breast) နှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများကို ဆက်လက် မျှဝေလိုက်ပါသည်။ ရင်သား (Breast) ကို နာမ်(noun) အဖြစ်သုံးသော ဝေါဟာရပုံစံများ… Discussion ဆံစ မှ ခြေဖျားအထိ ဝေါဟာရများ အပိုင်း - ၁၄ (B… 26 Likes
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၈) Advertising ကြော်ငြာ/ကြော်ငြာခြင်း။ ၁။ advertising . အရုပ်၊ သီချင်းစာသား၊ စကားလုံးများသုံး၍ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၊ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုအားဝယ်ယူအသုံးပြုရန်လူထုအားဆွဲဆောင်ခြင်း Example: How much does Coca-C… Discussion သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၈) 20 Likes ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်စကား/အရပ်သုံး စကားပြောသင… ဒီတစ်ပတ်ကစပြီး စီးပွားရေးအင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍအတွက် အသုံးအများဆုံးအခြေအနေတွေကို အလွယ်တကူရည်ညွှန်းလိုသူတို့လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် Andrew D. Miles ရေးသားပြုစုတဲ့ 100 Ways to Say it in Business English စာအုပ် ကိုပြန်လ… Discussion ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်စကား/အရပ်သုံး စကားပြောသင… 120 Likes စကားလုံးများနှင့် စကားစုများကိုအထူးပြုခြင်း… ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ စကားလုံးစကားစုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ စကားလုံး စကားစုတွေဟာ တီထွင်ဖန်တီးတဲ့ စာပေတွေ၊ အစီရင်ခံစာတွေ၊ ဆွဲဆောင်ရေးသားဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အခြား စာအမျိုးအစားတွေ ရေးသား… Discussion စကားလုံးများနှင့် စကားစုများကိုအထူးပြုခြင်း… 29 Likes တန်ဘိုးအကြောင်းတွေးကြည့်ခြင်း တစ်နေ့……၊ အဲဒီတစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်ဟာ lexus ကားကြီးကိုမောင်းပြီး လူ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား ၊ မြင်းလှည်း စတာ တွေ အင်မတန်းရှုပ်ထွေးလွန်းလှတဲ့ မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ထဲကို ၀င်လာမိပါတယ်။Lexus ကားကို ကိုယ်တိုင် မောင်ြး… Discussion တန်ဘိုးအကြောင်းတွေးကြည့်ခြင်း 43 Likes J@M - Episode 18 - Talking about People * Click on the picture to seealarger image. ပုံကြီးကြည့်လိုပါက အထက်ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ Jam: The Web Design Company that Teaches You English 18. Talking about People (သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်… Discussion J@M - Episode 18 - Talking about People 8 Likes
ကြားဖြတ်ပြောဆိုခြင်း (Interruptions) [ Zawgyi ] တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ဖက်သားကစကားပြောနေရင်း ကိုယ်ကတစ်ခုခုမှတ်ချက်ပေးလိုတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြတ်ပြောရမှန်းမသိအောင် လေဖောင်ဖွဲ့နေလို့ အခက်ကြုံရဖူးပါသလား။ ဖြတ်မပြောလို့ကလဲ မဖြစ်ဆိုတော့ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်လိုမ… Discussion ကြားဖြတ်ပြောဆိုခြင်း (Interruptions) 73 Likes သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ - ၅ ၁။ to addanew part to something ဖြည့်စွက်ခြင်း add (ပိုကောင်းစေရန်ပေါင်းထည့်ခြင်း) e.g. The book would lookalot more attractive if they addedafew colour pictures. ရောင်စုံပုံလေးတွေထပ်ထည့်ရင်စာ… Discussion သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ - ၅ 25 Likes ရင်ခွင်မဲ့ ဘ၀များ လောကမှာ တရားအရိပ်ပြီးရင် မိဘမေတ္တာရိပ်ထက် လုံခြုံတဲ့အရိပ် မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းလက်ခံထားတဲ့ အမှန်တရားပါ။ မိခင်တွေကသာ သားသမီးတွေကို အသက်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်ကြသလို၊ ဖခင်တွေက သားသမီးတွေကို ဘ၀တခုလုံ… Discussion ရင်ခွင်မဲ့ ဘ၀များ 33 Likes Love Idioms and Phrases ဗယ်လင်တိုင်းအထူးဆောင်းပါးများရဲ့နောက်ဆုံးအဖြစ်ဒီနေ့မှာ love idioms &amp; phrases တွေတင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။အသုံးတည့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Idioms Puppy Love လူငယ်ဘ၀မှာခံစားရတဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြင… Discussion Love Idioms and Phrases 51 Likes ဆံစ မှ ခြေဖျားထိ ဝေါဟာရများ အပိုင်း- ၃ (Eye) ဆံစမှ ခြေဖျားအထိ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများတွင် ယခုတစ်ပတ်အတွက် မျက်လုံး(Eye)နှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများကို ဆက်လက်မျှဝေလိုပါသည်။Eye ကို နာမ်(noun) အဖြစ်အသုံးပြုသောဝေါဟာရပုံစံများခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပ… Discussion ဆံစ မှ ခြေဖျားထိ ဝေါဟာရများ အပိုင်း- ၃ (Eye) 40 Likes ချစ်သူများနေ့ (Valentine's Day) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ဆိုလျှင် ချစ်သူများနေ့ Valentine's Day တစ်ခေါက်ရောက်ပြန်ပေတော့မည်။ ချစ်သူရီးစားရှိသူတို့ကတော့ ထိုနေ့တွင် holding hands each other affectionately ကယုကယင် ရွှေလက်တွဲလျက် celebrate th… Discussion ချစ်သူများနေ့ (Valentine's Day) 117 Likes ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (Making Decision) “Waiting hurts. Forgetting hurts. But not knowing which decision to take can sometimes be the most painful...” ― José N. Harris, MI VIDA စောင့်ရခြင်းသည်စိတ်ဒုက္ခ။ မေ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားပြန်လျှင်လည်းနာကျင်… Discussion ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (Making Decision) 73 Likes
IELTS ဖြေဆိုသူများအတွက် စာမေးပွဲအကြံပြုချက်မ… Listening ပိုင်းတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ - ရံဖန်ရံခါ ယခင်စာမေးပွဲများမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် မတူသောကြောင့် စာမေးပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေချာစွာ ဂရုစိုက်၍ ဖတ်ရှုပါ။ - Speaker မှပြောနေသေ… Discussion IELTS ဖြေဆိုသူများအတွက် စာမေးပွဲအကြံပြုချက်မ… 61 Likes
အသုံးဝင်သော စကားအသုံးအနှုန်းများ (On/Remember… It's not on! (ဒါဟာမဖြစ်သင့်ဘူး) You say it's not on! when you mean that something is not at all acceptable: ဒါဟာမဖြစ်သင့်ဘူး (it’s not on!) ကို အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို လက်သင့်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာ သုံးပ… Discussion အသုံးဝင်သော စကားအသုံးအနှုန်းများ (On/Remember… 99 Likes